अधिक $ 12b सम्पत्ति पूरापूर नियमन भरोसा कम्पनी प्राप्त गर्न BitGo
BitGo, संस्थागत लगानीकर्ताले लागि डिजिटल मुद्रा सुरक्षा समाधान मा एक नेता, यो राज्य ट्रस्ट कम्पनी प्राप्त गर्न निश्चित सम्झौता मा प्रवेश गरेको छ कि घोषणा, एक दक्षिण डकोटा – अधिक पूरापूर नियमन भरोसा कम्पनी $12 अरब सम्पत्ति. लेनदेन अझै पनि चलनअनुसारको बन्द अवस्था र नियामक अनुमोदन विषय हो.
"विश्व वित्तीय बजार अन्त-को अन्त समाधान भेटी दुवै साथै डिजिटल मुद्राहरू कानुनी र अनुपालन आवश्यक नियन्त्रण मुख्यधारा वित्तीय विभागहरू एकीकृत सुरक्षित गर्न प्रविधि खोजीमा छन्"
राज्य ट्रस्ट आन्तरिक राजस्व कोड को सबै लागू आवश्यकताहरू पूरा 408 लगानीको सल्लाहकारहरू ऐन परिभाषित रूपमा योग्य Custodian रूपमा सेवा गर्न 1940. विश्वास कम्पनी द्वारा प्रस्तावित custodial सेवाहरू, BitGo डिजिटल मुद्रा सुरक्षा सुरक्षा सफ्टवेयर सँगसँगै, संयुक्त कम्पनीहरु मात्र पूर्ण-थाक गर्नेछ, संस्थागत लगानीकर्ताले द्वारा आयोजित डिजिटल मुद्रा निवेश लागि ओनसाइट र अनलाइन सुरक्षा को मात्रा प्रदायक मा.
“BitGo र राज्य भविष्यको लागि उत्पादन निर्माण गर्दै – सबै लगानीकर्ताले आवश्यक सुरक्षा र नियन्त्रण संग नयाँ प्रविधि विवाह।”
Bitcoin संग यातायात जरिवाना तिर्ने काजाकिस्तान परीक्षा
काजाकिस्तान यो cryptocurrency संग यातायात जरिवाना तिर्न सम्भव गरिरहेको छ. मोबाइल आवेदन र सेवा OKauto.kz पहिले नै सफलतापूर्वक अनुप्रयोगको निर्माताहरू एक द्वारा परीक्षण गरिएको छ – अली Shaykhislam. तथापि, सेवा को लेखक नयाँ प्रकार्य अझै पनि परीक्षण मोडमा चलिरहेको जोड.
को को निर्माताहरू Bitcoin को cryptocurrency मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन लागि सरकार जरिवाना तिर्ने को संभावना बुझे.
यो जारी प्रमाणिकरण सेवा र जरिवाना सूचनाहरू प्रदान गर्दछ जो निःशुल्क अनुप्रयोग हो, अन्य कुराहरु.
यसलाई त्यहाँ काजाकिस्तान मा cryptocurrencies लागि कुनै आधिकारिक स्थिति छ कि टिप्पण लायक छ, तिनीहरूले पैसा न त आर्थिक साधन मानिन्छ छैन.
रूसी cryptocurrency बिल प्रस्तावित
वित्त को रूसी मंत्रालय एक बिल प्रकाशित “डिजिटल वित्तीय सम्पत्ति मा”, जो रूस मा cryptocurrencies legitimize डिजाइन गरिएको छ.
वित्त मंत्रालय रूपमा डिजिटल वित्तीय सम्पत्ति बुझाउँछ “विद्युतीय फारममा सम्पत्ति, गुप्तिकरण प्रयोग गरि सिर्जना (क्रिप्टोग्राफिक) हो।”
तपाईं मात्र विशेष आदानप्रदान माध्यम अर्को cryptocurrency लागि टोकन वा rubles आदान प्रदान गर्न सक्छन् – “डिजिटल वित्तीय सम्पत्ति विनिमय संचालक”.
मात्र कानुनी निकाय रूस मा दर्ता, र व्यवस्था नियालेर कुनै. 39-FZ “को जमानत बजार मा” वा कुनै. 325-FZ “संगठित ट्रेडों मा” यस्तो अपरेटर बन्न सक्छ.
उद्घाटन र खाता कायम राख्न लागि प्रक्रिया केन्द्रीय बैंक द्वारा स्थापित गर्नुपर्छ.
को नियामक कि कम्पनीहरु rubles को लागि धन जुटाउने प्रयोग मात्र टोकन किन्न चाहन्छ, वित्त मंत्रालय चेतावनी.
सेवकाईमा यो cryptocurrency सामान्य खरिद निषेध गर्न असम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छ, किनभने अन्यथा अवैध व्यापार इच्छा “चल्नु” यो बजार.
पनि कागजातमा त्यहाँ स्मार्ट अनुबंध र खानी को परिभाषा हो, जो क्षतिपूर्ति को लागि विनिमय मा सिर्जना वा cryptocurrency को प्रमाणीकरणको लागि entrepreneurial गतिविधि मानिन्छ. को Miners को गतिविधिहरु मा के कर लगाइन्छ गरिनेछ, निर्दिष्ट गरिएको छैन.
कागजात राज्य Duma तीन अध्ययनहरू पाउँछ भने, र पनि संघ परिषद को अनुमोदन र रूसी राष्ट्रपति को हस्ताक्षर प्राप्त, यसलाई लागू गरिनेछ 90 यसको आधिकारिक प्रकाशन पछि. बिल संसद छलफलहरू समयमा संशोधन गर्न सकिन्छ.
को उद्यमी प्रयोग ...
अघिल्लो पोस्ट:को गणितज्ञ लागि Bitcoin को मूल्य गणना 2018
अर्को पोस्ट:Chainalysis – को गुमनाम Bitcoin नष्ट कि कम्पनी